Aid for flood victims - Catholic Church Myanmar
posted Aug 11, 2015, 3:53 AM by Myanmar Signis
Cardinal Charles Maung Bo of Burma issues the following appeal for flood victims:
A WOUNDED REGION BATTERED BY NATURE's FURY AWAITS COMPASSIONATE RESPONSE
AN APPEAL BY THE CARDINAL CHARLES BO YANGON MYANMAR ON BEHALF OF THE FLOOD AFFECTED PEOPLE OF MYANMAR
The recent cyclone and the massive outpouring of rains in RAKINE, CHIN AND SAGAING regions of Myanmar has left many dead, thousands homeless and in need of urgent aid. These regions were one of the poorest in the country (70% poverty). RAKINE state has seen inter religious conflicts and has 120000 internally displaced people.
Now their agony is compounded by the nature's fury. Death toll is increasing but massive homelessness, starvation and vulnerability to infectious diseases sets in. Catholic Church has rushed in with emergency supplies.
The scale of devastation is massive. Inaregion which is chronically poor, the poor have last everything and became refugees. Urgent survival assistance is needed in many villages. We appeal to all good hearted people to come forward to support our brothers and sisters with emergency food, medical assistance, hygiene kit, bedding a, basic clothing and shelter,
The church with its wide spread network of 16 Caritas offices and its Emergency Units has swung into action and reached these areas. Three dioceses are reaching out to the victims directly. A task force is being formed for emergency response.
On behalf these suffering people I appeal to all generous friends and benefactors to be Good Samaritans to our doubly wounded brothers and sisters.
Your support in cash and kind is most welcome. Kindly send your support etc to the following address
Praying for every blessing on each one of you,
+Charles Cardinal Maung Bo., DD, SDB
သဘာဝဘေးန္တရာယ် ဆိုးရွားစွာခံစားနေရသော ဒေသများအတွက် စာနာထောက်ထားကူညီမှုများ လိုအပ်နေခြင်း
ရဟန်းအမတ် ကာဒီနယ်ချားစ်ဘို(ရန်ကုန်၊ မြန်မာ) မှ မြန်မာနိုင်ငံရေးဘေးသင့်ပြည်သူများ ကိုယ်စား အကူအညီတောင်းခံခြင်း
မကြာသေးမှီက မြန်မာနိုင်ငံ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ချင်းပြည်နယ်နှင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းတို့တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းနှင့် မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းမှုတို့ကြောင့် လူအသေ အပျောက် များ၊ ထောင်နှင့် ချီသောအိမ်ယာမဲ့များဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး အရေးပေါ် အကူ အညီများ လိုအပ် နေပါသည်။ ယင်း ဒေသများ သည် နိုင်ငံတွင်း အဆင်းရဲဆုံး (၇၀% ဆင်းရဲနွမ်းပါး) ဒေသများလဲဖြစ်သည်။ ရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်း တွင် ဘာသာရေးပရိပက္ခများကြောင့် (၁၂၀၀၀၀) သောပြည်သူများမှာ ရွေ့ ပြောင်း ဒုက္ခသည် များဖြစ် နေကြသည်။
ယင်းဒုက္ခများအပြင် ယခုပြင်းထန်သော သဘာဝဘေးဒုက္ခကိုပါ ထပ်လောင်းခံစား နေကြရသည်။ အသေအပျောက်နှုန်းမြင့်မားနေပြီး၊အိမ်ယာမဲ့များတိုးပွားလာကာဆာလောင်မွတ်သိပ်မှု၊ထိခိုက် နာကြင် မှုနှင့် ရောဂါဘယများလဲဝင်ရောက်လာနေသည်။ သို့ဖြစ်၍ ကက်သလစ်အသင်းတော်မှ အရေး ပေါ် ကူညီကယ်ဆယ်မှုများ လုပ်ဆောင်လျှက်ရှိပါသည်။
မူလကပင်ဆက်တိုက်ဆင်းရဲနွမ်းပါးသောဒေသတွင် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများထပ်မံများပြားပြီး ဆင်းရဲ သား များဘ၀မှ ရေဘေးဒုက္ခသည်များဘ၀ဖြစ်နေကြရသည်။ အရေးပေါ်အသက်ဆက်နိုင်ရေး အကူ အညီ များလဲလိုအပ်နေသည်။ အစားအစာ၊ ဆေးဝါး၊ တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေးပစ္စည်း၊ အိပ်ရာ၊ အ၀တ် အထည်နှင့် နေအိမ်တို့အတွက် ကူညီလှူဒါန်းပေးကြပါရန် စိတ်ကောင်း နှလုံး ကောင်းရှိသူများထံသို့ ကျွန်ုပ်အနေဖြင့် တောင်းဆိုလိုက်ပါသည်။
ကက်သလစ်အသင်းတော်မှ Caritas အဖွဲ့အစည်းပေါင်း (၁၆) ခုဖြင့်ချိတ်ဆက်ပြီး ယင်း ဒေသ များသို့ အကူအညီများပေးနေပါသည်။ သာသနာနယ် (၃) ခုတွင်အရေးပေါ်ကူညီရေးအဖွဲ့များ ဖွဲ့ ထားပြီး ရေဘေးဒုက္ခသည်များကို တိုက်ရိုက် အကူအညီများ ပေးနေပါ သည်။ ဒုက္ခ များထပ်ဆင့် ထပ်ဆင့် ခံစားနေရသော ကျွန်ုပ်တို့၏ညီအကိုမောင်နှမများကို စိတ်ကောင်း စေတနာ ကောင်းရှိ သူများ၊ ကူညီပေးလိုသူများမှ ကောင်းသောဆမာရိတန်ကဲ့သို့ ကူညီ လှူဒါန်းကြပါရန် ရေဘေး ဒုက္ခ သည်များ ကိုယ်စား ကျွန်ုပ်အနေဖြင့် တောင်းဆိုလိုက်ပါသည်။
လှူဒါန်းလိုသော ငွေနှင့်ပစ္စည်းများကို အောက်ပါလိပ်စာသို့ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
ဖုန်း- ၀၁-၃၉၂၅၁၇၊ ၀၁-၂၄၅၄၆၇
Fr.Joseph Mg Win
ဗိုလ်တထောင်မြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ 
ဖုန်း- ၀၁-၃၉၂၉၃၇၊ ၀၉၅၀-၁၅၃၂၄
Dr.Win Tun Kyi
Karuna Myanmar Social Services(KMSS)
၂၉၂ (က) ပြည်လမ်း၊ စမ်းချောင်းမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ 
ကမ္ဘောဇဘဏ်လိမိတက် ကနေ တဆင့်လျှူဒါန်းလိုပါက ဖြည့်စွက်ရမည့်အချက်အလက်များမှာ၊
Name of Bank: Kanbawza Bank Limited
Address of Bank: No. 33-49, Corner of bank Street and Maharbandoola Garden Road,
Number of account (IBAN) : 12-015-06010906003689401
Code BIC/SWIFT : KBZBMMMY
Name of holder (NO personal account) : Karuna Mission Social Solidarity